Kuzoshiyana izandla eNdebeni yoMhlaba yekhilikithi - Bayede News
Kuzoshiyana izandla eNdebeni yoMhlaba yekhilikithi
Iseyinkinga eyakuleli nemigomo yezokuxhumana namazwe omhlaba
Ukubhacaza kweqembu lakuleli emiqhudelwaneni yaphambilini sekwenze abalandeli abaningi bamanqika ngokuleseka eNdebeni yoMhlaba yanonyaka. Kodwa intatheli yezeMidlalo kuBAYEDE, uLUNGA NTULI, ibona u-AB De Villiers ekususe konke okwesaba…
UKUDLALA kahle kuka-AB De Villiers sekubuyise ithemba lokuthi iqembu lakuleli lekhilikithi lingamangaza, libuye nayo iNdebe yoMhlaba kulokhu.
Imidlalo yeNdebe yoMhlaba yekhilikithi izoqala ngosuku olwaziwa ngolwezithandani emhlabeni jikelele, umhla ka-14 kuNhlolanja, kanti izoba se-Australia nase-New Zealand.
Phela sekuyinto ejwayelekile ukuthi leli qembu, elibizwa nge-Proteas, liye lithwelwe ngeqoma emiqhudelwaneni emikhulu, kodwa lidumaze, libuye nenduku yombangandlala.
Lo “mkhuba” walo sewenze iningi labalandeli lingabi nathemba lempumelelo kodwa indlela adlale ngayo u-De Villiers ngempelasonto edlule seyenza kujike ukucabanga. Kwazi bani, mhlawumbe bengaliqeda nje leli shobolo.
UDe Villiers – ongukaputeni weqembu emidlalweni yosuku olulodwa – uzifake emabhukwini omlando ehlanganisa amaphuzu angu-50 iwaqoqa emabholeni angu-16. Ikhulu ulihlanganise esabhekane namabhola angu-31. Bebebhekene nelinye lamaqembu aphambili kulo mdlalo, i-West Indies.
Njengoba uDe Villiers ekwazile ukuqopha lo mlando, pho yini engamvimba ukuba aqhubeke nalo mgqigqo omuhle naseNdebeni yoMhlaba?
Kodwa-ke, kuzodingeka nozakwabo bavuke emaqandeni, bamlekelele, kungabe esesindwa yedwa. Lapha sibheka abanye babadlali okumele basukume bathathe izikhali zabo balwele izwe.
Hashim Amla – Ungomunye wabadlali elingangatshazwa ithalente nekhono labo kulo mdlalo, futhi uhlale ekukhombisa nokuzimisela njalo uma esenkundleni. Okuhle wukuthi bobabili laba badlali badlale kahle kule midlalo yokuzilungiselela, futhi babonakala sebezwana kangcono manje. Lokhu kuyinto enhle eqenjini.
Quinton de Kock – Nakuba isalimele okwamanje, kodwa awangabazeki amagalelo ale nsizwa esencane ephekwe nguGeoffery Toyana kuBizhub Lions.
Rilee Rossouw – Usemncane, futhi kuthe uma enikezwa ithuba walibamba ngezandla zombili. URossouw usanda kushaya u-128 ngesikhathi elakuleli lidlala ne-West Indies.
David Miller – Le nsizwa yaseMgungundlovu iningi beliyingabaza. Ukuqokwa kwayo abaningi abakuthokozelanga, kodwa iziphendulele nge-bat ngesikhathi ishaya u-70 bedlala eThekwini. Nakuba kungekho umuntu oyovala isikhala sikaLance Klusener ezinhliziyweni zabalandeli, kodwa uMiller unaso isibindi sokushaya ibhola njengaye.
Ngasohlangothini labashwibi kuzothenjelwa kuDale Steyn, Morne Morkerl, Vernon Philander, Aaron Phangiso uma edlalile no-Imraan Tahir.
U-AB ukubeke kwacaca naye ukuthi ukwenza kahle kulemidlalo abayidlale ne-West Indies kuyabakhuthaza kakhulu.
“Kubalulekile ukwenza kahle, ikakhulukazi njengoba kungasasele sikhathi esitheni ngaphambi kokuba siye eNdebeni yoMhlaba. Ngiyabathemba abadlali esinabo, kanti sihlanganise abancane nalabo abanamava,” kusho uDe Villiars.
Kubadlali abazobe bengaqali ukuya kulo mqhudelwano kubalwa oMiller, Amla, De Villiers, Steyn, Tahir, Du Plesis, Duminy noMorkel.
Selilonke iqembu limi kanje: AB de Villiers (we-The Unlimited Titans), Hashim Amla (we-Nashua Cape Cobras), Kyle Abbott (we-Sunfoil Dolphins), Farhaan Behardien (we-The Unlimited Titans), Quinton de Kock (we-bizhub Highveld Lions), JP Duminy (we-Nashua Cape Cobras), Faf du Plessis (we-The Unlimited Titans), Imran Tahir (we-Sunfoil Dolphins), David Miller (we-Sunfoil Dolphins), Morne Morkel (we-The Unlimited Titans),Wayne Parnell (we-Chevrolet Warriors), Aaron Phangiso (we-bizhub Highveld Lions), Vernon Philander (we-Nashua Cape Cobras), Rilee Rossouw (we-Chevrolet Knights), Dale Steyn (we-Nashua Cape Cobras).
Abadlali abahlanu abangase bavelele kulo mqhudelwano
Chris Gayle (we-West Indies) – Ithemba lokunqoba kwe-West Indies lo mqhudelwano lisezandleni zale nkunzi. Uyinsizwa enethambo, futhi engasabi ukulishaya ibhola uma iphethe i-bat. UGayle akakhethi ukuthi ibhola lesingaki elishwitshwayo, futhi akanawo umusa – uma ungumshwibi othambile, ukushiya umangele ekulandisa ibhola ezihlweleni.
Kumar Sangakkara (we-Sri Lanka) – Le nsizwa izobe ingaqali ukudlala kulo mqhudelwano kanti umthwalo wokuhola leli qembu uzobe usemahlombe ayo. Ungumdlali omuhle, nokwaziyo ukutakula iqembu uma isimo sithanda ukulitshekela.
Brendon McCullum (we-New Zealand) – Akagcini nje ngokunqaka kwasani oludlula i-batsman, kodwa uphinde adlale indima enkulu uma sekumele ayithathe yena i-bat. Ikhono lakhe lokushaya ibhola, alithumele kuyo yonke indawo enkundleni, lenza kube nzima satshe ukumkhipha.
AB De Villiers (wakuleli) – Uza kulo mqhudelwano enokukhulu ukuzethemba njengoba ephethe irekhodi asanda kulishaya. Into eyenza u-AB ahluke kwabanye abadlali wukuthi akagcini nje ngokudlala kodwa uyawuthanda lo mdlalo kanti lokho kubonakla ngendlela akhululeka ngayo uma eshaya ibhola.
David Warner (we-Australia) – Njengabo bonke abadlali base-Australia abangama-batsman, uWarner uyalisakaza ibhola. Okuhle ngaye ukuthi akalishayi nje noma yikanjani, kodwa ukwenza ngobuhlakani lokho.
nguQhelani Msweli Jan 22, 2015